Article submitted by: minkyaw thuyein on 30-Jun-2013
သြ၀ါဒ ဆရာကြီးများ ရဲ့ သြ၀ါဒတွေ ။
သြ၀ါဒပေးသူက " ဟေ့ ကောင်တွေ တော်ကြ ရပ်တန်းက ရပ်ကြ ၊ ဒါဘဲနော် "။
လို.တော အပြော ပါဘူး ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အရေးတွေကို အစိုးရ ၊ ပြည်သူလူထု၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပုဂိုလ်တွေ ညှိနှုိုင်း ဆောင်ရွက်ဘို.သြ၀ါဒ ပေးမှု တွေရှိတယ် ၊ သြ၀ါဒ ဆိုတာ လူတိုင်းပေးတတ် တတ် ။ သြ၀ါဒပေးတာ
လောက် လွယ်တဲ့ ကိစ္စ ဘယ်မှာမှ မရှိဘူး။ ကြားလို.ကောင်းတာ မရှိဘူး။ လက်တွေ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာကို ပြောစမ်းပါ ၊ အကြုံပြုစမ်းပါ။ ပိဋီကပ် ၃ ပုံ အာဂုဏ်ဆောင် ၅၅၀ နိပါတ် တွေ အလွတ်ဟော နေလို.၊ ရွက်နေ
လို. ပြသနာတွေ အေးမသွားပါဘူး။ ကွက်စိပ်ဆရာလဲ ဒီလောက်တော့ ဟော
တတ်ပြောတတ်ပါတယ် ။ သြ၀ါဒ ပေးတတ် ပါတယ်။ ဒီ သြ၀ါဒတွေ ကို မြန်မာတွေ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် တွေက နားထောင်တယ်ဘဲ ထားပါ အုံး၊ ဗုဓ္ဒဘာသာ
ကို နဂိုကမှ မယုံကြည်။ ဗုဓ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကို နဂိုက မှ မလေးစား၊ ဖြစ်နိုင်
ရင်၊ သင်္ဃန်းဆြွဲ့ပီး ဒါးနဲ.တောင်ခုတ်မဲ့ မွတ်စလင်တွေက နားထောင်မယ်လို.များထင် သလား?
နှမ်းဖြူးတဲ့ အလုပ်ဟာ လူတိုင်းတတ်တယ်။ ဟိုတုန်းကသီချင်းတပုဒ်အရဆိုရင် အာလူးလာမပေးနဲ့ လို. ပြောရလိမ့်မယ်။ နေပါအုံး ဒီပြသနာတွေကို ဘယ်သူ
တွေက စလာတာလဲ မေးပါရစေအုံး။ သမိုင်းလေး အုတ်ကျင်းလေး ဖတ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက် သွားပြီး အခြေအနေမှန်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ လေ့လာ
ကြည့် ပါအုံး သြ၀ါဒရှင်ကြီးရဲ့။
သြ၀ါဒဆရာတွေရဲ့ သြ၀ါဒတွေကြောင့် မြန်မာတွေ မကြာခဏ ဆိုသလိုဘဲ အငိုက် မိမိနေတယ်၊ ဘိန်းငိုက် နေသလိုဘဲ ။ သြ၀ါဒဆရာတွေဟာ ခြေမွှေး
မီးမလောင် လက်မွှေးမီးမလောင် အချိန်တန် ထမင်းပွဲရှေရောက် စားသောက်
နေထိုင်ရတာတွေနဲ့ ဇိမ်တွေ.နေပြီး လောကကြီး ၃ ပါးရော အခြေအနေမှန်နဲပါ ကင်းကွာနေပုံ ရှိတယ် ဒါကတော့ မဖြစ်ကောင်း ဘူးထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ငရဲကြီး ၆ ထပ် ဘယ်အထပ်မှာ ရောက်နေတာ ဆိုပြီးလဲ ဆိုလို.မဖြစ်ဘူး။ နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကလဲ ကိုယ်ကဥာဏ် မမီလို. ကိုယ်ထက် သိရှိနားလည်မယ် ထင်ရတဲ့သူတွေ မေးကြည်ပြန်တောလဲ. ရေရေ ယာယာ မသိရဘဲ၊ ဂေါတမက ဒီင်္လိုပြောတယ် ဗုဓ္ဒက ဒီလိုဟောတယ် ဆိုပြီး အဖြေကို တရားနဲ့သာရှာ ကြည့် ဆိုတော့။ ဒုံရင်းဘဲ ပြန်ရောက်လာတယ်၊ မေးတာသာ အဖတ်တင်တယ်၊ မေးမိတာ မှားလေခြင်းလို. ဘဲ မှတ်ယူရတော့ မလား ၊ သူတိုလဲ ငါ့လိုဘဲ မသိကြဘဲကိုးလို. ယူဆရမလား။
တပ်မတော်သည်. နိုင်ငံတော် နှင်. နိုင်ငံတော်သားတိုအား ကာကွယ်ရမည် ။ ဘုန်းကြီး ရဟန်းတို.သည် ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို.သည် ဗုဒ္ဒဘာသာ သာသနာကို စောင်ရှောက်ကာကွယ်ရမည် တဲ့။ တပ်မတော်. ဘုန်းကြီး ရဟန်း သံဃာတော်များနှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် နိုင်ငံ
သားအပေါင်းတို.သည် နိုင်ငံတော် နိုင်ငံသား ဘာသာ သာသနာတို.ကို လက်တွဲ
ကာကွယ် စောင့် ရှောက်ရမည် ။ အဲဒါ ဘာဖြစ်သလဲ ၊ ဘာမှားနေလို.လဲ ?
ခရစ်ယန် မွတ်စလင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘုန်းကြီးတွေ ဘာသာဝင်တွေကရော ဘာလုပ်နေကြတယ် ထင် သလဲ? သူတို.အမျိုးဘာသာ သာသနာကို မြင်တင် ကာကွယ်နေကြတာဘဲ ပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာ အယူအဆ ယုံကြည်ချက် ပေါင်းစုံရှိတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ။ လူတွေဟာ လူ.သဘာဝ အလျှောက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိကြတာ ဘာသာ သာသနာ ဆိုတာ မရှိခင်ကတည်းက
ဘဲ။ ကမ္ဘာ.သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ ဘာသာ သာသနာဆိုတာတွေ ပေါ်လာခဲ့
အပြီးမှာ ခရစ်ယန်တွေ၊ မွတ်စလင် တွေဟာ သူတို. စစ်တပ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ. လှည့်လည် သွားလာပြီး၊ သူတို.ဘာသာ သာသနာကို ပြန်.ပွား စေတာမှာ လူတွေကို အတင်းအကြပ်သွတ်သွင်းခဲ့တာ တွေ.ရတယ်၊ ခရူးစိပ် လို.လူသိများ
တဲ့ဘာသာရေး စစ်ပွဲ ဆိုတာတွေဟာ ခရစ်ယန်နဲ့ မွတ်စလင်တွေကြား မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ.ရတယ်၊ ဒီစစ်ပွဲတွေဟာ အခုချိန်ထိလဲ အကြောင်းအမျိုး
မျိုး ၊ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြစ်နေတုန်းဘဲ ဖြစ်တယ်။
တချို.သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနော်ရထာလက်ထက်က ဗုဒ္ဒဘာသာ သွတ်သွင်း မြင့်တင်တာတွေနဲ့ နှုိုင်း ခြင်ကြတယ် ၊ သဘောရော သဘာဝရော ရသရော လက်တွေ.ကျင်းသုံးမှုတွေမှာပါ ဘာမှ တူညီမှုမရှိ တာကို သူတို.မမြင်ကြဘူး ၊ ပြောလိုက်ရရင် ပြီးရော လို.သာ ပြောကြတာ။ ကမ္ဘာအနှံ သွားခဲ့နဲ့ ခရစ်ယန် တွေ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုုင်းလို.မရပါဘူး။
ခရုးစိပ် စစ်ပွဲတွေဘဲခေါ်ခေါ် ဂျူးနဲ့ခရစ်ယန်က တဖက် မွတ်စလင်ကတဖက် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာတွေဟာ ဘာကြောင့်ဆိုတာသေသေချာချာ စမ်းစစ်လိုက်
တော့လဲ ဘာမှမဟုတ် ဘိုင်ဘယ်လို.ခေါ်တဲ့ကျမ်းစာ ဓမ္မဟောင်းနဲ.ဓမ္မသစ်၊ အဟောင်းလိုက်သူ ၊ အသစ်လိုက်သူတွေကြား ဖန်တီးရှင်ကို God ခေါ်လိုသူ Allah ခေါ်လိုသူတို.ကြား အစွဲကြီးတဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတာကလွဲလို. ဘာမှ မပိုဘူး
ဆိုတာတွေ.ရတယ် ။ ပြောရမယ် ဆိုရင် စီးပွားရေးနယ်ချဲ့ နေသူတွေနဲ
ဘာသာရေးနယ်ချဲ့သူတွေကြားရန်ပွဲ ဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်
ဘဲဘာသာစုံ လူမျိုးစုံတိုဟာ အကြောင်းတခုမဟုတ် တခုနဲ့ ရန်သတ္တု ဖြစ်ကြ
တာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ၊ ဂျပိုးကို လိပ် လုပ်တာတွေလဲ ရှိကြတယ် ၊ အထူးသဖြင့်အစွန်းရောက် ၀ါဒီတွေက ပြသနာ
ဖေါ်တတ်ကြတယ်။ တဦးချင်း တယောက်ချင်းရန်သတ္တုဖြစ်ရာက သူ.လူ ကိုယ့်လူ တွေပါလာပြီး ၊ ဘာသာတူ လူမျိုးတူအုတ်စု တွေထိ ဖြစ်လာရင်း ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ထိဖြစ်လာတော.တယ် ။၊
မှတ်မိကြအုံးမှာပေါ့ အာဖ၈န်နိစတန်မှာရှိတဲ့၊ ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော်တွေကို၊ အလကား
သက်သက် မွတ်စလင် ဘာသာဝင် တာလေဘန်တွေက သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်
ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လေ။ ဒါဟာ အချောက်တိုက် စော်ကားတာဘဲ၊ အာလာက
လွဲလို. ဘာကိုမှ မယုံကြည် လက်မခံတဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း မွတ်စလင်တွေကို ဗုဓ္ဒဘာသာ ဆန်.ကျင်ကြဘို. အချက်ပေး မြောက်ပေး လိုက်တာ လို.မြင်တယ် ။ တာလေဘန်တွေကို ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသားတွေက
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးအုံးမလို.တဲ့။ ဘာရည်ရွယ် ပြန်တယ်တော့ မသိဘူး။
ဗုဓ္ဒဘာသာတွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေ ပြသနာပေါ့်ရင် ခရစ်ယန်တွေ အနေချောင်
တယ် အစားချောင်တယ်လို.များယူဆသလားမသိဘူး။ ကိုယ်ြ့ပသနာ ကိုယ်သာ
ကြည့်ရှင်းကြလို.ပြောလိုက်တာနဲ့ အတူတူဘဲ.။ ဘာသာ သာသနာ ရေးတွင် လွတ်လပ်စွာ ယူဆနိုင်သော၊ ကိုးကွယ်ဆောက်တည်နိုင်သော အခွင့်အရေးအရ ဆောင်ရွက်ကြရေးဘဲ ပေါ.။
မြန်မာနိုငံသမိုင်းမှာ ကုလား ဗမာ အထိကရုဏ်းဆိုပြီး ရှိခဲ့ဘူးတယ်လို.သိရတယ် ၊ ရွှေဖီ ရေးတဲ့ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကြောင့် လို. ဆိုတယ်၊ ဘာတွေ ရေးထားလို.ဆိုတာတော့ အသေးစိပ်ပြောထားတာမရှိဘူး။ ၁၉၃၀ ခုနှစ် ကာလတွေပိုင်းတုန်းကလဲ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ဗုဓ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးတပါးကို ရန်ကုန်မြို. ၃၅ လမ်းမှာ မွတ်စလင်တယောက်က အချောက်တိုက် ဒါးနဲ့ခုတ်လို. လဲအထိကရုဏ်းဖြစ်ဘူးသေးတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ဘာသာကို မဆို ဘာသာရေးလွတ်လပ်မုတွေပေးပါရက်နဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်ကရော လူတွေကပါ လိုက်လျှောစွာအားပေးပါရက်နဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ မြန်မာမှာ တင် မဟုတ်၊ မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ မခံ နိုင်လောက်အောင် အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားနေတာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သီးမ
ခံနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ တွေထိရောက်လာခဲ့ ပြီ ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ်က ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တော မွတ်စလင်တွေရဲ့ ပြသနာမှာ ပြည်ပ မွတ်စလင် အဖွဲ.ချုပ် ဆိုတာက ၀င်ပြီးရှုတ်လာတာတွေ
ကြောင့် မြန်မာဗုဓ္ဒဘာသာတွေ အထူးသဖြင့် ရဟန်းသံဃာတွေကပါ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်လာကြရတယ်။ ဗုဓ္ဒဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ် ရေး ဟာ ရဟန်းသံဃာတွေမှာ လဲ အထူးတာဝန်ရှိနေတယ် ။.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာစုံ.ကို သီးခံခြင်းမျိုးစုံနဲ့ လူမျိုးစုံက အခုလောက်ခံနေတာ ဘဲ တော်လှပြီ. ၊ သီးမခံ နိုင်တော့တဲ့အဆုံး ပေါက်ကွဲလာတာဘဲ ။ ဒီပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခြင်နေတာ ကြာပြီ။ ဆင့်ကွဲ ဆင့်ကဲမဖြစ်ရ အောင်တေ့ာ၊လွှုံတ်ထားလို.တော မရဘူး။းက ၀ိုင်းထိမ်းရမယ်ပေါ့ ၊ ဒီလိုထိမ်းတာမှာ ၂ ဖက်စလုံးကိ ထိမ်းရလိမ်.မယ် ။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး လွှတ်ထားလို.တော့ မရဘူး။ ဘယ်လောက်ထိမ်းထိမ်း. ဒါမျိုးတွေကတော့ အခါအားလျှော်စွာ ဖြစ်နေမှာဘဲ။ အလွန်အကျွန်တွေ မဖြစ်ရအောင်တော့ တာဝန်ရှိ သူတွေက ထိမ်းသိမ်းရ လိမ့်မယ်။
ဒီနေ.မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ တရားမ၀င် ကျုးကျော်ရောက်ရှိနေတဲ့ ၊ သူတိုကိုယ်သူတိုရီုဟင်ဂျာ လို.ခေါ်တဲ့ ခေါ်တောကုလားတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်
ကိူ သူတို.ပိုင် နယ်မြေအဖြစ်သိမ်းပိုက်ဘို.လက်နက် ကိုင် ကြိုးစားနေတာ ကြာနေပြီ ၊ ဘယ်လိုမှ ရခြေမရှိတော့ ဗုဓ္ဒဘာသာ ကိုရော ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေ
ကိုရော စော်ကား တိုက်ခိုက်ပြီး သူတို.ကို ဘဲ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေက စော်ကားနေ
သယောင် မမှန်စကားတွေ ထုပ်လွှင့် နေကြတယ် ။
မွတ်စလင်တွေဟာ တရိရိနဲ့မြန်မာ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေကို အမျိုးမျိုးရန်စ နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သူတို.အကြောင်း လဲ တကမ္ဘာလုံးက သိပါတယ် ၊ မြန်မာ ဗုဓ္ဒဘာသာ
တွေ သီးခံနေကြတာလဲ ကြာပါပြီ ။ သူတိုပြောဆိုစွပ်စွဲနေ သလိုသာ စိတ်ရှိတိုင်း ထလုပ်ရရင် မွတ်စလင်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရုပ်ရေးပြဘို တောင်ရှိမှာမဟုတ်
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် ယိုးဒယား( ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလဲ
မွတ်စလင်တွေဟာလက်နက် ဆွဲကိုင်ပြီး ပြသနာလုပ်နေကြတယ် ၊ ရခိုင်ပြည်
နယ်က ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တော မွတ်စလင်တချို.ဟာ လှေသမ္မာန် တွေနဲ့ ယိုးဒယား
တောင်ပိုင်းကူးပြီး ယိုးဒယားနဲ.မြန်မာအကြား မိတ်ပျက်အောင် ဖန်တည်းဘို.
ကြိုးပန်းကြ တယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဓ္ဒဘာသာ မွန်ပြည်နယ် ၊ ခရစ်ယန် ကရင်
ပြည်နယ် တို.ကို ကျုးကျော်ဝင်ရောက်ဘို. ကြိုးစားကြပုံရှိတယ် ။
ဒါတွေကိုကြည့်ရင် မွတ်စလင်တွေဟာ ဘယ်လောက် အကြံကြီးတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်၊ ရှေ.အနာ၈ါတ် သူတို့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အညီ လိုသည်ထက်မပိုတဲ့ တန်ပြန် လှုပ်ရှားနိုင်မဲ့ လက်တွေ.ကျတဲ့ အစီအစဉ် မြန်မာ ဗုဓ္ဒဘာသာ တွေမှာ ရှိရမယ် ၊ ရှိကောင်းတယ် ၊ ရှိသင့်တယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ကိုကိုယ် ကို.်ဘာသာ သာသနာကိ ကာကွယ်ရေးအတွက် တရားတယ် ၊ မျှတတယ်။
ဘာသာသာသနာ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေ သောဝ်။